Miaraka amin'ny fanarenana ny fizahan-tany ho an'i Afrika, mitohy ny tolom-piavotan'ny fizahantany arabo saodianina
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Miaraka amin'ny fanarenana ny fizahan-tany ho an'i Afrika, mitohy ny tolom-piavotan'ny fizahantany arabo saodianina
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao Mafana Jamaika • Kenya Breaking News • Vaovao • Safety • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Najib Balala, sekreteran'ny fizahantany Kenya
Raha ny minisitry ny fizahantany Saodiana HE Ahmed Al-Khateeb, dia hita tany Jamaika nanao satroka Bob Marley, nanomboka ny revolisiona iray momba ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Mila fanampiana ny fizahantany manerantany ary eo indray i Saudi Arabia izay mitana ny andraikitra tsy hita ho an'ny Etazonia momba ny fizahantany, amin'ny fanofahofana ny sainam-pirenena Saodiana avo sy malaza.
Eo an-dàlana i Saudi Arabia to mamindra UNWTO avy any Madrid mankany Riyadh ho mpampiantrano foibe vaovao an'ny World Tourism Organization (UNWTO), saingy efa mpampiantrano ho an'ny World Travel and Tourism Council (WTTC) biraom-paritra ary fandraisana andraikitra manerantany hafa.
Kenya dia nanasa ireo solontena hanatrika ny fihaonana an-tampony amin'ny famerenana ny fizahantany afrikanina amin'ny zoma ho any amin'ity firenena afrikana atsinanana ity Betsaka ny solontena tsy afaka miandry ny hihaona amin'ny minisitry ny fizahantany Arabo Saodiana Ahmed Al Khateeb, izay mety ho kintana mamirapiratra indrindra amin'ny hetsika.
Ny sekretera ny fizahan-tany any Kenya, Najib Balala, koa dia mpitarika manerantany izay nandray anjara tamin'ny hetsika eran-tany, anisan'izany ny eTurboNews-nanohana Tambajotra fizahan-tany manerantany ary ny Birao fizahantany afrikanina. Miaraka amin'ny minisitry ny fizahantany any Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, Balala dia natao a Maherifo momba ny fizahantany nataon'i WTN tamin'ny taon-dasa.
Tonga tany Kenya ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Bartlett ary hiteny an-tampon'io fihaonana io amin'ny maha-mpitarika eritreritra manerantany momba ny faharetan'ny fizahan-tany sy ny fanarenana azy. Hanolotra ny lahateny lehibe ho an'ny fihaonambe afrikanina izy.
Raha any Kenya, ny minisitry ny Jamaika dia hanao sonia MOU miaraka amin'ny satellite Global Center Resilience & Crisis Management Center (GTRCMC) ao amin'ny Kenyatta University aorian'ny fitsidihana ny alakamisy.
Ny filoham-pirenen'i Kenya Kenyatta dia filoham-boninahitry ny Honorary (misolo tena an'i Afrika) an'ny GTRCMC miaraka amin'ny praiminisitra Jamaikana Andrew Holness ary Marie-Louise Coleiro Preca, filohan'i Malta teo aloha.
Ny zava-nisongadina tamin'ny fitsidihan'i Bartlett tany Kenya dia ny fitohizan'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny famatsiam-bola miaraka amin'ny minisitry ny fizahan-tany ho an'ny Saudi Arabia, Ahmed Al-Khateeb, izay nanomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny volana jona rehefa nifantoka tamin'ny famatsiam-bola anatiny ny kaonferansa roa tonta an'ny Jamaika-Saudi Arabia. fitomboana ara-toekarena sy famoronana asa vaovao eo an-toerana ho an'ny fireneny Karaiba.
Rehefa hita ho ekipa revolisionera i Bartlett sy Al Khateeb dia mazava fa niova i Arabia Saodita ary manohy miova haingana - miaraka amina miliara manohana an'io revolisiona io.
Tamin'izany fotoana izany, ny minisitra Al Khateeb dia nitarika delegasiona avo lenta nandritra ny fitsidihany farany tany Jamaika, anisan'izany ny mpanatrika, Abdurahman Bakir, filoha lefitra misarika ny famatsiam-bola sy fampandrosoana ao amin'ny minisiteran'ny fampiasam-bola any Saudi Arabia, ary Hammad Al-Balawi, jeneraly Mpitantana ny fitantanana fampiasam-bola sy ny fanaraha-maso ao amin'ny minisiteran'ny fizahantany saodiana.
Balala, Bartlett, ary Al Khateeb dia mety ho fandresen'ny mpitondra eo an-toerana miaraka amin'ny fomba eran-tany hitondra fanantenana kely ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany maharary.
Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina, ary ny mpanamora ny Project Hope eo ambany fitarihan'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha Dr. Taleb Rifai, dia nilaza fa: "Ny Birao Afrikana fizahan-tany dia mijoro ary vonona hanampy sy handrindra izay fandraisana andraikitra mety hipoitra avy amin'ny adihevitra lehibe ho avy Fanarenana ny fizahantany afrikanina. Ny fitoniana dia tsy vitan'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany tena ilaina amin'ny kaontinanta misy antsika, fa koa fitoniana sy filaminana ho an'ny ankamaroan'ny firenentsika. ”
Ny minisitry ny Arabia Saodita Al Khateeb, izay filohan'ny vola mitentina amina miliara dolara amerikana ho an'ny fampandrosoana, dia naneho ny fahitany ny fampiroboroboana ny asa fandraharahana arabo saodianina manerantany.
Fihaonana an-tampon'ny fizahantany fizahan-tany dia natao tao Riyadh, Saudia Arabia, tamin'ny Mey tamin'ity taona ity. Nifantoka tamin'ny vanim-potoana vaovao nidiran'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fomba fanarenana ihany koa ny sehatry ny fizahantany afrikanina izay nisy fiatraikany ratsy tamin'ny valanaretina COVID-19.
Ny fihaonana an-tampon'ny Kenya dia antenaina hitrandraka ny fotoana mety hisian'ny fiaraha-miasa matanjaka eo amin'ny firenena afrikanina sy ny fanjakan'ny Saudi Arabia, ary hanalefaka ny voka-dratsin'ny valanaretina ary hampiakatra ny faharetana.